Plezi Otu: Ngwá Ọrụ efu iji wepụta weebụsaịtị B2B gị | Martech Zone
Plezi Otu: Ngwá ọrụ efu iji wepụta weebụsaịtị B2B gị
Mgbe ọtụtụ ọnwa gachara, Plezi, Onye na-eweta ngwa ahịa ngwa ahịa SaaS, na-ewepụta ngwaahịa ọhụrụ ya na beta ọha, Plezi One. Ngwá ọrụ a n'efu na nke nwere nghọta na-enyere ụlọ ọrụ B2B obere na ọkara aka ịgbanwe webụsaịtị ụlọ ọrụ ha ka ọ bụrụ saịtị ọgbọ ndu. Chọpụta ka o si arụ ọrụ n'okpuru.
Taa, 69% nke ụlọ ọrụ nwere weebụsaịtị na-agbalị ịzụlite visibiliti ha site na ọwa dị iche iche dị ka mgbasa ozi ma ọ bụ netwọk mmekọrịta. Agbanyeghị, 60% n'ime ha enweghị ọhụụ gbasara ego ngbanwe ha na-enweta site na webụ.
N'ịbụ ndị na-eche mgbagwoju anya nke usoro ahịa ahịa dijitalụ dị iche iche dị iche iche, ndị njikwa chọrọ ihe abụọ dị mfe: ịghọta ihe na-eme na ebe nrụọrụ weebụ ha na ịmepụta ụzọ na weebụ.
Mgbe afọ 5 nke na-akwado ihe karịrị ụlọ ọrụ 400 na ngwa ahịa akpaaka ya niile, Plezi chọrọ ịga n'ihu site n'ikpughe Plezi One. Ebumnuche bụ isi nke sọftụwia efu a bụ ịgbanwe webụsaịtị ọ bụla ka ọ bụrụ onye na-emepụta ihe, iji kwado ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke azụmaahịa site na oge ha malitere.
Ngwá ọrụ dị mfe iji gbanwee weebụsaịtị gị ka ọ bụrụ onye na-edu ndú
Plezi One na-akwado ọgbọ nke ndị ndu tozuru etozu site n'itinye mpempe akwụkwọ ozi akpaghị aka na saịtị ụlọ ọrụ. Ọ na-enye gị ohere ịghọta ihe ndu ọ bụla na-eme na saịtị ahụ, yana otu esi agbanwe kwa izu na bọọdụ dị ọcha.
Nke a bụ ihe ị ga-atụle ma ọ bụrụ na ị na-amalite njem dijitalụ gị ma ka na-achọ ngwọta kachasị mma maka ọgbọ ndu na nchịkọta weebụ jikọtara ọnụ. Isi uru nke Plezi Otu bụ na ọ dịghị mkpa ka ị nwee ihe ọmụma teknụzụ ọ bụla iji ya ma ọ bụ malite ịzụ ahịa gị. Nke a bụ ka ọ si arụ ọrụ.
Malite atụmatụ ọgbọ ndu gị
Ụdị bụ ụzọ kacha adaba na kpọmkwem iji tụgharịa onye ọbịa na-amaghị aha ka ọ bụrụ onye ndu tozuru etozu na webụsaịtị. Ma enwere ọtụtụ ohere iji nweta onye ọbịa ka ọ dejupụta fọm, ma ọ bụ ịkpọtụrụ, rịọ maka nkwupụta, ma ọ bụ nweta akwụkwọ ọcha, akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ webinar.
On Plezi Otu, A na-eme imepụta ụdị ngwa ngwa ka ị gbakwunye akụ ọhụrụ. Plezi na-enye ndebiri dị iche iche, yana ajụjụ emegharịrị na ụdị ụdị dị iche iche iji kwekọọ na usoro nke usoro ịzụrụ ihe (ma hụ na ị naghị emebi onye ọbịa nke chọrọ naanị ịdebanye aha maka akwụkwọ akụkọ gị na ajụjụ).
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta template ụdị nke gị, ị nwere ike ime ya site na nchịkọta akụkọ wee họrọ ubi ndị ịchọrọ iji. Ị nwere ike imegharị ụdị ahụ ka ọ dabara na nhazi weebụsaịtị gị. Ị nwekwara ike hazie ozi nkwenye gị maka GDPR. Ozugbo ị mepụtara ndebiri, ị nwere ike tinye ha na saịtị gị n'otu pịa!
Ị nwekwara ike ịmepụta ozi-e na-esochi nke a na-ezigara ndị dejupụtara fọm ahụ ozugbo, ma ọ bụ iziga ha ihe enyemaka achọrọ ma ọ bụ iji mesie ha obi ike na e lebara arịrịọ kọntaktị ha anya. Iji smart field, ị nwere ike hazie ozi-e ndị a site na iji aha mbụ mmadụ ma ọ bụ akụrụngwa ebugoro na-akpaghị aka.
Ghọta omume ndị na-ege ntị ma tozuo ụzọ
Ugbu a ndị ọbịa gị na-amalite dejupụta fọm gị, kedu ka ị ga-esi tinye ozi ha? Nke a bụ ebe Plezi One's contact tab na-abata, ebe ị ga-ahụ ndị niile nyere gị ozi kọntaktị ha. Maka kọntaktị ọ bụla, ị ga-ahụ ọtụtụ ihe ga-enyere gị aka ịhazi usoro gị:
Ọrụ onye ọbịa na akụkọ ihe mere eme gụnyere:
Ibe ndị elere anya na saịtị gị
Ọwa nke butere ha na saịtị gị.
Nkọwa nke atụmanya. emelitere ozugbo kọntaktị ahụ nyere ozi ọhụrụ site na iji ọdịnaya ndị ọzọ na-emekọrịta ihe:
Aha mbụ na aha ikpeazụ
Enwere ike iji taabụ a dị ka obere ikpo okwu njikwa mmekọrịta ndị ahịa (CRM) ọ bụrụ na i nwebeghị otu. Ndị otu gị na-ere ahịa nwere ike tinye ndetu na ndekọ ọ bụla iji debe mgbanwe nke mmekọrịta gị na atụmanya gị.
Ị nwere ike ịlele mmekọrịta niile nke ndị na-ege gị ntị na webụsaịtị gị, ka edekọtara mmekọrịta ndị a. Ị ga-enwe echiche ka mma nke ihe ndị na-ege gị ntị na-achọ yana ọdịnaya ha nwere ike ịmasị.
Edemede nsochi ga-egosi gị ebe atụmanya gị na-abịa, ihe ha na-eme na webụsaịtị gị yana mgbe ha lọghachiri. Nke a bụ ihe bara uru n'ihi na ọ na-enye gị nghọta tupu gị na ha amalite mkparịta ụka. Nchịkọta nwere ike inyere gị aka soro ma ghọta atụmanya gị.
Nyochaa arụmọrụ nke atụmatụ gị
Ngalaba akụkọ na-enye gị ohere ịhụ ọnụ ọgụgụ nke omume ahịa gị na ilele anya. Plezi ahọrọla ilekwasị anya na data dị mkpa iji ghọta arụmọrụ nke saịtị gị na atụmatụ ịzụ ahịa gị, kama ịnọ na mgbagwoju anya na metrics. Ọ bụ ụzọ dị mma maka onye njikwa ma ọ bụ onye na-ere ahịa iji nweta ahịa dijitalụ!
N'ebe a, ị nwere ike ịhụ ihe niile na-eme na saịtị gị maka oge a na-enye, yana ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa na ndị ahịa ahịa, yana eserese nke oghere ntụgharị gị iji hụ ọtụtụ ndị ahịa ahịa gị wetara gị. Nkwalite njin ọchụchọ (SEO) ngalaba na-enye gị ohere ịhụ mkpụrụ okwu ole edobere na ebe ị debere.
Ka i si hụ, Plezi Otu na-emegide ọka nke ihe ngwọta dị mgbagwoju anya (ma na-ejikarị eme ihe) site n'inye ahụmahụ mmiri mmiri maka ngwá ọrụ nke dị n'obi nke atụmatụ ịzụ ahịa ụlọ ọrụ.
Ọ na-enye ahụmahụ kensinammuo ikwe ka ụlọ ọrụ ndị na-enwebeghị otu raara onwe ha nye ịmalite ịghọta mkpụrụ na bolts nke ahịa dijitalụ wee malite ịmepụta ụzọ site na ebe nrụọrụ weebụ ha. Ọ dị mfe ịtọlite, dị mfe iji yana 100% n'efu! Ị nwere mmasị ịnweta Plezi One n'oge?
Debanye aha maka Plezi One n'efu ebe a!
Tags: b2bb2b ndu ọgbọCRMụdị okikeụdị ndebiriụdị ngwá ọrụndu ndundu genedu ọgbọedu ndúpleziplezi otutozuo nduọrụ ndị ọbịa
Paul-Louis bụ onye njikwa okporo ụzọ na Plezi, B2B marketing automation software maka ndị na-ere ahịa.
Mgbasa Ozi Omume vs. Mgbasa Ozi Contextual: Kedu ihe dị iche?
Ụzọ 6 iji soro ndị na-emetụta ya na-arụ ọrụ na-enweghị nkwado